Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Game CD Collection of The Week (V5I10) ♫
♪ Game CD Collection of The Week (V5I10) ♫
Action RPG ဂိမ်းအမျိုးအစား၊ နာမည်ကျော် အာပီဂျီဂိမ်းစီးရီး Witcher 3: Wild Hunt အတွက်ထွက်ရှိလာတဲ့ည Expansion Pack ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ဇာတ်ကောင် မွန်းစတားမုဆိုး Geralt အဖြစ် ကစားရမှာဖြစ်ပြီး Toussaint နေပြည်တော်မှာ စွန့်စားခန်းတွေဆင်နွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Simulation, Strategy ဂိမ်းအမျိုးအစား၊ နော်မန်ဒီကမ်းတက်တိုက်ပွဲရဲ့ (၇၂)နှစ်မြောက်အဖြစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ War Game ခွေပါ။ (၁၉၃၆-၁၉၄၈)ခုနှစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၀)ကျော်၊ Admiral Unit (၁၀၀)ကျော်၊ Field Marshal Unit (၅၀)ကျော်၊ ထောက်ပံ့ရေးစက်ရုံမျိုးစုံ၊ သယံဇာတ Resource (၆)မျိုး ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
3. War Truck Simulator 2016
Action, Indie, Simulation ဂိမ်းအမျိုးအစား၊ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်အတွက် လိုအပ်တဲ့လက်နက်များ၊ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပို့ဆောင်ရေးတွေ၊ ဒဏ်ရာရလူနာရွှေ့ပြောင်းရေးတွေ စတဲ့ Mission ပေါင်းစုံကို ရန်သူ့နယ်မြေကြားထဲကနေ အချိန်ကိုက်စွန့်စားမောင်းနှင်ရမယ့် စစ်သုံးထရပ်ကားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
4. Minecraft: Story Mode – Episode 6: A Portal to Mystery
Graphic adventure ဂိမ်းအမျိုးအစား၊ ပဟေဠိဆန်တဲ့ ၀င်္ကပါထွက်ပေါက်များစွာနဲ့ အခန်းတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ Jesse, Petra, Lukas, Ivor တို့ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကို ဆက်လက်ဆင်နွှဲရမယ့် Minecraft: Story Mode ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Episode ဖြစ်ပါတယ်။
5. American Truck Simulator: Arizona
Indie, Simulation ဂိမ်းအမျိုးအစား၊ အမေရိကန်ထရပ်ကားဂိမ်းစီးရီးရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ခွေဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ ဆဋ္ဌမမြောက်အကြီးဆုံးပြည်နယ် အရီဇိုးနားမြေပုံကိုမောင်းနှင်ရမှာဖြစ်ပြီး Phoenix, Tucson, Flagstaff အစရှိတဲ့ မြို့နယ် (၁၅)ခုပါဝင်ကာ နာမည်ကျော်နေရာ (၆၀)ကျော် ဖန်တီးပေးထားမှာပါ။
Available @ Excellent 09250025755